”လာကွ အယ်ဒီတာချုပ် ရှိတယ်။ မင်း ဝင်တွေ့ လိုက်ဦး”
”အေး မင်းစာမူ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း သုံးမယ်ကွာ။အထူးဆောင်းပါးအနေနဲ့ပေါ့။ အခုရေးသလို စိုက် ပျိုးရေးဆောင်းပါးတွေပဲ ရေးကွာ။ စာမူခလဲ ငါးဆယ် ကနေ ခုနစ်ဆယ့်ငါးကျပ် တိုးပေးထားတယ်။ ရေး နိုင်ပါ့မလား”
”ဟုတ် ဆရာ ကျွန်တော် ရေးနိုင်ပါတယ်”
”ညီလေး အစ်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကွာ။ ညီလေးကို ခွင့်မတောင်းဘဲ ညီလေးစာမူခ ထုတ်သုံးမိလို့”
”ဒီလိုကွာ အစ်ကို့သားက စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် တက်နေတာ။ အဲဒါ ငွေလိုနေတော့ ညီလေးစာမူခ ထုတ်ပြီး ပို့လိုက်မိတယ်။ အခုဟာက ဆန္ဒပြပွဲတွေ လုပ်နေကြတော့ အခက်အခဲရှိလို့ပါ”
”ဟာ ရပါတယ်ဆရာ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ခဏခဏတော့ အခက်အခဲမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ ဆရာ”
”ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ။ နောက်တော့ အဆင်ပြေ သွားမှာပါ။ အခုဟာက အရေးအခင်းကာလ ဖြစ် နေလို့ပါ”
”အစ်ကိုကြီးရေ..ဒီနေ့ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေ သိပ်မရှိဘူးဗျ။ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အရေး ပေါ်ဌာန ရှေ့မှာတော့ လူငါးရာတစ်ထောင်လောက် တော့ ရှိမယ်။ ဆန္ဒပြရင်း ဟောပြောပွဲလုပ်နေတာ တွေ့ခဲ့တယ်ဗျ”
”ဟေ ဟုတ်လား၊ နောက် ဘာသတင်းကြားသေး လဲဟ”
”မြောက်ဥက္ကလာဘက်မှာ ပွဲတော်တော်ကြမ်းတယ် တဲ့ အစ်ကိုကြီးရေ။ မေဓာဝီလမ်းမှာ ဆန္ဒပြတဲ့လူ တစ်သောင်းလောက်က လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ဝိုင်းထားလို့ နောက်ထပ် လုံခြုံရေးတပ်ရင်းတစ်ရင်း တပ်ကူဖြည့်ထားရတယ်ဗျ”
”တကယ်ပေါ့ အစ်ကိုကြီးရာ။ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေ က လူစုခွဲဖို့ပြောတာ လူစုမခွဲလို့ တပ်မတော်လေ တပ်က လေယာဉ်သုံးစင်းနဲ့ဝဲပြီး စာတွေကြဲတယ်တဲ့။ အထဲမှာ လူစုခွဲဖို့ မေတ္တာရပ်ခံတာ။ လူစုမခွဲရင် တာဝန်အရ ပစ်ခတ်လူစုခွဲမယ်လို့ သတိပေးထား တယ်ဆိုပဲ”
”ဗျာ..အစ်ကိုကြီးသတင်းတွေက စုံလို့ပါလား၊ ဘယ်ကသတင်းတွေရလာလဲ အစ်ကိုကြီး”
”ထူးထူးဆန်းဆန်းမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ သတင်းစာထဲမှာပါတဲ့ သတင်းတွေပါ။ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မှာ ဆန် စက်တွေ အဖောက်ခံရတယ်လို့လဲပါတယ်”
”ဒါနဲ့ အစ်ကိုကြီး ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်တာရာ အဖမ်းခံရတဲ့သတင်းကရော တကယ်လားဗျ”
”ကောလာဟလပါကွာ။ ဗိုလ်တာရာရဲ့ မျိုးချစ်တော် လှန်ရေးအဖွဲ့က အဖမ်းမခံရတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြီးပါပြီ”
”ကျွန်မ သိသလောက်တော့ အစ်ကိုရယ် ဆန္ဒပြသမားတွေနဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ပြဿနာတက်ပြီး ပစ်ခတ်မှုဖြစ်တာပါပဲ”
”လူအသေအပျောက် ရှိသေးလား ဆရာမ”
”လူသေတယ်လို့တော့ ကျွန်မ မကြားမိဘူးရှင့်၊ သူနာပြုဆရာမသုံးဦးနဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးတော့ ဒဏ်ရာရတာ ကျွန်မသိတယ်”
”အင်း..နာမည်တွေတော့မသိဘူးရှင့်။ ကျွန်မ အဲဒီလောက်ပဲသိတာ”
”ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကို စစ်တပ်ကသေနတ်နဲ့ပစ်ပြီး လူစုခွဲတာ ဆယ့်ငါးနေရာ ရှိတယ်တဲ့ကွ။ သေတဲ့လူ သုံးဆယ့်သုံးဦး တဲ့ကွာ၊ ခြောက်ဆယ်လောက်ဒဏ်ရာရတယ်၊ တစ်ရာကျော် အဖမ်းခံရတယ်တဲ့”
”အေး အဲဒါကြောင့်နေမှာဟ။ မြောက်ဥက္ကလာ၊ တောင်ဥက္ကလာနဲ့ သာကေတမြို့နယ်က ရဲစခန်းတွေ မီးရှို့ခံရတယ်တဲ့”
”သေချာပါတယ်ကွာ တောင်ဥက္ကလာရဲစခန်းက ရဲတပ်ကြပ်ကြီးညွန့်မောင်နဲ့ ရဲတပ်ကြပ်တင်ငွေတို့ ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံရ တယ်တဲ့”
အောင်သိန်းဝင်း ခဏရပ်၍ နားထောင်ခဲ့ရသည့် သတင်းစကားများက အမှန်တကယ်ဆို ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းလှသည်။ ဆန္ဒပြသူများအား လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပစ်ခတ်လူစုခွဲရာမှ ဆန္ဒပြသမားများက လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ခေါင်းဖြတ်သတ် ဖြတ်သည့်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာသည်။ သြဂုတ် ၈ရက်၊ ၉ရက်၊ ၁ဝရက် သုံးရက်ကြာ ဆန္ဒပြပွဲများအတွင်း တန်ပြန်လူသတ်ပွဲများနှင့် တပ်မတော်လေယာဉ်ပေါ်မှ သတိပေးစာများကြောင့် အောင်သိန်းဝင်းမှာ အိမ်ပြန်မရောက်မီ လမ်းမပေါ်တွင် ”ဝူး”ကနဲ လေကိုမှုတ်ခါ သက်ပြင်းချမိသည်။
လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာများတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ အစိုးရအဖွဲ့တို့အား အကြည်?
မိမိ၏ မွေးနေ့ပါတီတွင် ဇိမ်မယ်များ မပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ဟာနန်ဒက်ဇ် ရှင်းလင်း
တာချီလိတ်မြို့၌ မီးခိုမြူများထပ်မံ အုံ့မှိုင်းများပြားလာမှုကြောင့် မြို့ပေါ်၌ မီးသတ်ယာဉ်မျ??